Ithegi: ulawulo lwepdf | Martech Zone
Ithegi: ulawulo lwepdf
Bona iividiyo ezihlekisayo kunye nemifanekiso ehlekisayo kwiKholejiHumor. Ingcebiso yomnqwazi kuScott Abel othumele le vidiyo imnandi (yenziwe kakuhle) malunga nenkomfa yefonti eSmall Indiana. Ndithandana neCentury Gothic.
Ungayivula le imeyile…
NgoLwesine, Meyi 15, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Namhlanje eposini ndifumene imvulophu ebhulowu enegama lam nedilesi eprintwe kakuhle ngaphambili. Idilesi yokuphendula yayiyi-PO Box kodwa isabonakala ibhalwe ngesandla. Xa ndatyhila imvulophu, yayinophawu lweHallmark kuyo. Ukufuna ukwazi kuye kwagqwesa kum ndaza ndavula ukuze ndifumane ikhadi elinomyalezo olandelayo: Le yiteknoloji yokubhala ngesandla kwaye ibethe ngqo ngqo